ဘုရားကြီးတိုက်: သတိပြု ဆင်ခြင်စရာ
Posted by Phayagyitaik, Naya Monastery on Sunday, April 7, 2013 at 6:01 AM
Walnuts can slash diabetes risk:
Eating walnuts two or three timesaweek can lower the risk of developing type two diabetes in women byaalmostaquarter, new research has claimed. Researchers studied nearly 140,000 women in the US and found that those who atea28gm packet of walnuts at least twiceaweek were 24% less likely to develop type two diabetes than those who rarely or never ate them.
အမျိူးသမီးတွေ တပါတ်ကို နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သုံးကြိမ် သစ်ကြားသီး စားခြင့်းဖြင့် အမျိူးသမီး လေးပုံတစ်ပုံမှာ ဖြစ်တက်တဲ့ နှစ်မျိူးသောဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်တယ်။ အမေရိကန်က အမျိူးသမီးပေါင်း တသိန်းလေးသောင်းကို လေ့လာ တွေ့ရှိချက်အရ သစ်ကြားသီးကို အနည်းဆုံး တပါတ် ၂ကြိမ်စားတဲ့ အမျိူးသမီးတွေဟာ မစားတဲ့ အမျိူးသမီးတွေထက် ဆီးချိူဖြစ်နိုင်ဖွယ် ၂၄%နှုန်း သိသိသာသာလျော့နည်းဆိုတာတွေ့ရတယ်။
Change in diet can alter gene:
Changes in food habits can alter gene expression that could negatively affect your health,anew study has found. The study by University of Masschusetts Medical School raise the striking possibility that even small amounts of these occasional indulgences may produce significant change in gene expression that could negatively impact physiology and health.
သင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူမပြုတဲ့ အစားစာကို လျော့စားခြင်းဟာ ဗီဇမျိူးစေ့ကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ် လို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အသစ်က ထောက်ပြနေတယ်။ ဒီသုတေသနကို မက်ဆာချူးဆက်တက္ကသိုလ်ကလုပ်တာဖြစ်ပြီး။ သူတို့ကပဲ မှတ်သားလောက်ဖွယ် ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ အခါအားလျော်စွာ အလိုလိုက်၍ အနည်းငယ်သော ပမာဏလေးကိုပဲစားခြင်းက စိတ်ရောကိုယ်ပါ မကောင်းသော အကျိူးဆက်ပေးတဲ့ ထူးခြားသော ဗီဇပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစိမ့်စိမ့်တွေး ပြီး ရယ်ကြမယ်
အင်္ဂလိပ် သင်္ခန်းစာ (၈)